Jehovah Adasefo Ndwom Nwoma—Ndwom Wɔ Kasa Ahorow Pii Mu
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kimbundu Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mfantse Mingrelian Nahuatl (Central) Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ndwom Wɔ Kasa Ahorow Pii Mu
Ɔgye edwumadzen paa ma woeetum akyerɛ ndwom kor pɛr ase akɔ kasa fofor mu. Na dɛ wɔbɛkyerɛ ndwom nwoma mua a, ndwom dodow 135 na ɔwɔ mu ase no, botum ayɛ abagura paa.
Jehovah Adasefo ayɛ edwuma a ɔtse dɛm, na wɔdze mfe ebiasa akyerɛ hɔn ndwom nwoma fofor a wɔato dzin Sing to Jehovah no ase akɔ kasa ahorow 116 mu. Iyi ekyir no, wɔakyerɛ ndwom no mu 55 ase akɔ kasa ahorow 55 so mu. Ɔrennkyɛr, yebenya ndwom nwoma yi wɔ kasa ahorow pii mu so.
Ndwom Asekyerɛ Nye No Mu Nsɛm Kyerɛw
Mprɛmprɛ yi, Jehovah Adasefo kyerɛ Bible ho nwoma ahorow ase kɔ kasa ahorow bɔbor 700 mu, na no mu bɔbor 500 wɔ Intanɛt do. Naaso ndwom nwoma asekyerɛ dze, ɔyɛ edwuma a ne yɛ yɛ dzen. Ebɛnadze ntsi a? Osiandɛ wɔ Sing to Jehovah no mu no, ɔwɔ mu dɛ wɔakyerɛ ndwom no mu nsɛm no ase akɔ kasa ahorow pii mu dze, naaso mbrɛ wɔtow ndwom no nnsesã.
Yerunntum mmfa magazine asekyerɛ nntoto ndwom asekyerɛ ho. Dɛ mfatoho no, sɛ kasa asekyerɛfo rekyerɛ Watchtower magazine no ase akɔ kasa fofor mu a, wɔbɔ mbɔdzen dɛ wɔbɛma ntseasee a ɔwɔ dza wɔrekyerɛ ase no mu no nyinara ada edzi. Naaso wɔ ndwom mu dze, ɔsor mbrɛ osi tse.
Mbrɛ Wɔyɛ No
Sɛ kasa asekyerɛfo rekyerɛ ndwom ase a, ɔkwan a wɔfa do kyerɛ ase no yɛ soronko koraa. Siantsir nye dɛ, ɔsɛ dɛ no mu nsɛm no ntseasee ba mu, ɔyɛ dɛw, na wɔkaa no ntsɛm.
Ɔsɛ dɛ ayɛyindwom no mu nsɛm ba famu koraa ma ɔdwontofo no dɛ ɔbɛtse nsɛmfua no ase na woeehu siantsir a ɔwɔ hɔ no ntsɛm. Wɔ kasa biara mu no, ɔsɛ dɛ nkasafua no nye ndwontow no kɔ do kama ma no tow yɛ dɛw, dɛ gyama ɔyɛ ɔdwontofo nankasa ne nsɛm.
Kasa asekyerɛfo no yɛ dɛn tum du dɛm botae yi ho? Wɔama kasa asekyerɛfo no akwankyerɛ dɛ wɔnkyerɛw nsɛm fofor a ɔda adwen a ɔwɔ Borɔfo Sing to Jehovah no a wɔrekyerɛ ase no mu no edzi, mbom sen dɛ wɔbɛkyerɛ nsɛm n’ase tsenn. Ɔwɔ mu dɛ kasa asekyerɛfo no bɔ mbɔdzen dɛ wɔbɛma Kyerɛwnsɛm mu adwen a ɔwɔ ndwom no ekyir no ada edzi dze, naaso wɔbɔ mbɔdzen dze hɔn kasaa mu nsɛmfua a ne ntseasee nnyɛ dzen, na ɔyɛ mberɛw dɛ wɔbɛkaa dzi dwuma.
Dza wodzi kan yɛ nye dɛ, wɔkyerɛ Borɔfo ndwom no ase tsenn. Afei, Ɔdasefo bi a no ho awea mu wɔ ndwom kyerɛw mu no bɔ mbɔdzen dan nsɛm no a wɔakyerɛ ase no yɛ no ndwom mu nsɛm a no tow yɛ dɛw, naaso ntseasee wɔ mu. Afei, kasa asekyerɛfo no san hwɛ ndwom mu nsɛm no mu bio hwɛ dɛ biribiara yɛ pɛpɛɛpɛr anaa, a adwen a ɔwɔ ekyir so nye dɛ ɔnye Kyerɛwnsɛm no hyia.
Jehovah Adasefo a wɔwɔ wiadze nyina no enyi gyei aber a hɔn nsa kãa ndwom nwoma fofor no, na nkorɔfo pii rohwɛ kwan dzendzenndzen dɛ wobenya bi wɔ kasa afofor pii so mu.
“Ɔkwan No Nye Yi”
Wɔba Behyia Mu Yɛ Ndwom